Filoha Indianina Ram Nath Kovind : Horaisin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina eny Iavoloha -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Indianina Ram Nath Kovind : Horaisin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina eny Iavoloha
Sambany no hitsidika an’i Madagasikara ny filoha Indianina Ram Nath Kovind taorian’ny taona 2017 nahavoafidy azy ho filoham-pirenena Indianina. Anio no higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny tenany miaraka amin’ny vadiny ary mpandraharaha indianina maro. Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny tany roa tonta no isan’ny anton-diany eto Madagasikara. Mariky ny fahavononan’i Inde hanolo-tanana an’i Madagasikara izao fahatongavan’izy ireo aty Madagasikara izao. Avy hatrany dia hihaona amin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany, hanamarika izay fiaraha-miasa amin’ny firenena roa tonta izay. Hisy ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Filoham-pirenena roa tonta aorian’izay
Manana ny anjara toerany eo amin’ny famoronan’asa amin’ny sehatry ny Informatika i Inde, ka isan’ny sehatra lehibe ahafahan’ny firenena roa tonta miara-miasa izany. Tafiditra ao anatin’ny diany moa ny fitokanana ny ivon-toerana lehibe “CGADR” eny Nanisana, na ny “Centre Géo-informatrique Appliqué au Développement Rural”.
Na ara-toekerana, na ara-indostria, dia firenena ifandrombahan’ny tandrefana amin’ny fiaraha-miasa aratoekarena i Inde. Tamin’iny herinandro iny no nanatanteraka fitsidihana tany Inde ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, ary nahavita fifanaovan-tsonia mitentina 13 miliara Euros. Ankoatra ny fanamboarana ny môterana fiaramanidina, dia ny angovo azo havaozina no sehatra niompanan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta tamin’izany. Heverina fa tsy ho ambakan’izany ny eto Madagasikara.
Ny firenena Indianina rahateo dia mpamokatra ireny “panneau solaire” hamidy aty Afrika ireny, ary mandray anjara feno amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Tombony lehibe ho an’i Madagasikara izao fitsidihan’ny filoha Indianina izao, satria dia sehatra iray ahafahana mampitombo ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Hisy moa ny hetsika ara-toekarena lehibe hotanterahina amin’izao fandalovany eto Madagasikara izao na ny “Business Forum Madagascar – Inde” ny alakamisy 15 marsa 2018 amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny Carlton. Antenaina fa fifanaraham-piaraha-miasa maro no ho vita sonia mandritra izany.
Filoha faha-14 mitondra ny firenena Indianina i Ram Nath Kovind. Nialohan’ny naha Filoha azy, dia efa Governoran’i Bihar any Inde izy ny taona 2015-2017, ary mpikambana tao anatin’ny Parlemantera Indianina ny 1994 – 2006.